ကျားမျိုးမတုန်းဖို့ ကာကွယ်စို့ Tiger | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Literature/Books » ကျားမျိုးမတုန်းဖို့ ကာကွယ်စို့ Tiger
ကျားမျိုးမတုန်းဖို့ ကာကွယ်စို့ Tiger
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Nov 20, 2010 in Literature/Books, South East Asia |5comments
တရုတ်ပြည်မှာ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာနဲ့ လိင်မှုစေ့ဆော်တဲ့ အားတိုးဆေးအလို့ငှာ အာရှတလွှားရှိ ရာပေါင်းများစွာသော ကျားများကို ခိုးယူသတ်ဖြတ်နေတဲ့ ဈေးကွက်ကို ပိတ်ဖို့ တောရိုင်းတိရစာ္ဆန် မှောင်ခိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက မြန်မာပြည်ရှိ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု အုပ်စုတခုနဲ့ ကနဦး သဘောတူညီချက်တခု ရရှိလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဝလူမျိုးစုတို့ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နေရာမှာရှိတဲ့ ဈေးကွက်တွေဟာ ကမာ္ဘပေါ်မှာ သားရဲတိရစာ္ဆန် မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှု အများဆုံး နေရာတခုဖြစ်ပြီး ကျားရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေ လွတ်လပ်စွာ ရောင်းချနေတဲ့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နေရာတွေထဲက တခုဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့် ဒီဈေးကွက်တွေကို ပိတ်လိုက်တာဟာ အရှေ့တောင်အာရှ ကျားဦးရေအပေါ် ကျရောက်နေတဲ့ ဖိအားတွေကို လျော့ကျသွးစေပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျားရောင်းဝယ်မှု အရင်းအမြစ်နေရာတွေဟာ အန္ဒိယနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားက ဆူမားတြားကျွန်းတို့လို ဝေးလံလှတဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီဈေးကွက်တွေကိုသာ ပိတ်နိုင်လိုက်ရင် ကျားတွေကို ရွှေ့ပြောင်းသယ်ဆောင် တာကို ရပ်တန့်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ သားရဲတိရစာ္ဆန် ကုန်သွယ်မှု စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ TRAFFIC အရှေ့တောင်အာရှဒေသ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဝီလျံစခေဒလာက ပြောပါသည်။
သူက မျိုးသုန်းအန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ တိရစာ္ဆန်မျိုးစိတ်တွေကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ ကျားထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ မတိုင်ခင်မှာ အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ကျားကောင် အရေအတွက်ဟာ ၃၂၀ဝ လောက်ထိ နဲပါးနိုင်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တရာကရှိတဲ့ တသိန်းလောက်ကနေ ၉ရ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ် ဗလာဒီမာပူတင် အိမ်ရှင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်မဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၁-၂၄ အထိပြုလုပ်မဲ့ ညီလာခံမှာ တောထဲရှိ ကျားရိုင်းအရေအတွက်ကို ၂၀၂၂ခုနှစ်ကျရင် နှစ်ဆအထိရှိစေဖို့ အပြီးသတ် စီမံချက်ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီညီလာခံဟာ သားရဲတိရစာ္ဆန်တခုချင်းအတွက် ကျင်းပတဲ့ ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့ ဖောပြထားပါတယ်။
တကယ်လို့ ဈေးကွက်တွေကိုသာ မပိတ်နိုင်ရင် ကျားသတ္တဝါတွေဟာ မျိုးတုန်းပါတော့မယ်။ ထိုင်း-မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ဒေသမှာရှိတဲ့ တရားမဝင် သားရဲတိရစာ္ဆန် ကုန်သွယ်မှုကိုသာ မတားဆီး နိုင်ရင် စိန့်ပီတာပတ်မြို့က ချမှတ်တဲ့ ဦးတည်ချက်တခုမှ အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ စခေဒလာက သောကြာနေ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမျာ ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဆယ်စုနှစ်တခုကြာ စုံစမ်းလေ့လာထားတဲ့ မှတ်တမ်းတခုအရ ကြောင်ကြီးမျိုးဝင် အကောင် ၄၀ဝကျော်ရဲ့ ရာပေါင်းများစွာသော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဝတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ တရုတ် မြန်မာ နယ်စပ်မြို့ မုန်းလနဲ့ ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ် တာချီလိတ်မြို့တို့မှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကုန်သည်တွေဟာ လိပ်ထားတဲ့ ကျားနဲ့ကျားသစ် အရေခွံများကို ကုန်လှောင်ရုံအသေးနဲ့ သိုလှောင်ပြီး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြပါတယ်။ အိမ်တွင်းအလှတန်ဆာပစ္စည်း၊ အဆောင်လက်ဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ လိင်ကိစ္စအတွက် ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အရိုး၊ ခြေသည်းလက်သည်း၊ လိင်အင်္ဂါများနဲ့ သွားတွေကိုလည်း တွေ့ရတယ်လို့ မှတ်တမ်းထဲမှာ ပါရှိပါတယ်။
မုန်းလမြို့ကို သားရဲတိရစာ္ဆန်အသား စားသုံးဖို့နဲ့ ဝယ်ယူဖို့လာကြတဲ့ တရုတ်ကုန်သည်တွေ၊ လောင်းကစားနဲ့ စုံတွဲတွေ၊ ပြည့်တန်ဆာတွေကြောင့် အထူးသဖြင့် ဝဒေသမှာ သားရဲတိရစာ္ဆန် ကုန်သွယ်မှုဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ကျားရိုးဝိုင်အရက်ဟာ လိင်ကိစ္စပြုလုပ်လိုသူများ အကြား ရေပန်းစားတဲ့ အဖျော်ယမကာ တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
တစိတ်တပိုင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လိုမျိုး ရထားပြီး အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ စစ်တပ်ရှိတဲ့ ဝတွေဟာ ဘိန်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးကို စီးပွားဖြစ် မှောင်ခိုရောင်းဝယ်ကြတယ်လို့ စွတ်စွဲပြောကြပါတယ်။
သူတို့ဟာ ပြင်ပကမာ္ဘနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်၊ အခုကိစ္စဟာလည်း သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လူမှောင်ခိုမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ အခြားရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့ ပြသနာတွေနဲ့ စာရင် အများကြီး အငြင်းပွားဖို့ မလိုတဲ့အပြင် သူတို့အတွက် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ရမဲ့ ပြသနာ ဖြစ်လို့ ဝတွေက ဈေးကွက်ကိုပိတ်ဖို့သဘောတူလိုက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စခေဒလာက ဝတွေဟာ သဘောတူညီချက်ကို လိုက်နာဖို့ ယုံကြည်နိုင်လောက်ပါတယ်လို့ သတိနဲ့ အကောင်းမြင်နေတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
By Denis D. Gray, Associated Press / November 19, 2010
Wildlife trafficking officials say they have reachedapreliminary agreement with an ethnic minority group in Myanmar to close down markets where hundreds of poached tigers from across Asia are sold for use in purported medicines and aphrodisiacs in China.
The markets, in an area of northeastern Myanmar controlled by the Wa minority, are considered one of the world’s hot spots for wildlife trafficking, and among the only places left where tiger parts are openly sold.
Schaedla, TRAFFIC’s Southeast Asia director, spoke ahead ofa“tiger summit” in St. Petersburg, Russia, aimed at saving the endangered species from extinction. There are believed to be as few as 3,200 wild tigers remaining, down from about 100,000acentury ago —adecline of 97 percent.
“If the markets are not closed, we will see the end of all tigers,” Schaedla toldapress conference Friday. None of the goals set at the St. Petersburg summit can be reached if the illegal wildlife trade in the Thailand-Myanmar-China border region is not stopped, he said.
A TRAFFIC report released Friday said inadecade-long investigation, hundreds of parts of more than 400 big cats were seen in the Myanmar-China border town of Mong La, controlled by the Wa, and Tachilek, on Myanmar’s border with Thailand.
The wildlife trade is especially rife in the Wa region, with Chinese traders coming to Mong La to buy and eat wild animals, gamble and consort with prostitutes in what TRAFFIC investigators described asa“wild west” atmosphere. Tiger bone wine isapopular drink with those out for sex.
“They’re interested in establishing contact with the outside world, and this isamuch less contentious issue than some of the other things that they’re facing, such as human trafficking or drugs or some of the other crime issues. And it’s perhaps alsoamuch more straightforward issue for them to take care of,” Schaedla said, explaining why the Wa may want to makeadeal to shut down the markets.
ဘာကိစ္စ ညာကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆအတွေးအခေါ်သစ်တွေ ဘယ်ကရလာလဲမသိဘူးနော် ဒါနဲ့စကားမစပ် ရခိုင်ဘက်ကဆင်စွယ်သယ်ယူပုံလေးတွေကလဲကြားရတာအဆန်းဗျ နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာပြောပါတယ် (မဟုတ်တဲ့နေရာမှာလေ)
(ကျားရောင်းဝယ်မှု အရင်းအမြစ်နေရာတွေဟာ အန္ဒိယနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားက ဆူမားတြားကျွန်းတို့လို ဝေးလံလှတဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်)
သူတို ့ဆီမှာတော့ သိဘူးလေ မြန်မာပြည်မှာကတော့ (ကနဦး သဘောတူညီချက်တခု ရရှိလိုက်ပါတယ်)
ဆိုတော့ တစ်ကယ် သဘောတူညီမှု ့ရရှိတဲ့ အချိန်ကြရင် ကျားဆိုလို ့
တိရိစ္ဆာန်ရုံထဲမှာနဲ့ကြောင်ဆိုလို ့
ကိုကိုကြောင် (ဒါတောင်ပြေးနိုင်မှနော်) ဘဲကျန်နိုင်တော့မယ်လို ့ထင်ပါကြောင်း။
သူတို့က ..မြန်မာပြည်ထဲကကျားတွေတော့ လာဝယ်နေပုံရတယ်နော…။
သူတို့နိုင်ငံထဲကျ .. ကျွန်းသစ်ခုတ်ခွင့်ပိတ်ထားပြီး…မြန်မာပြည်ထဲကျ..အတင်းကို လာဝယ်ကြံဖန်နေတော့တာပါပဲ..။
ဘေးနိုင်ငံတွေချမ်းသာပြီး ..မြန်မာက ကျန်ရစ်ရင်တော့ .. မသက်သာလှပါဘူး..။
တိုင်းပြည်တိုးတက်ကြီးပွားရေးကလည်း .. ဘယ်သူမှလှည့်ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်..။
မြန်မာလူငယ်တွေ .. ဘာကိုဦးစားပေးကြသလဲ.. ဘလော့တွေကြည့်ရင်ကို တော်တော်သိသာတယ်..။
နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဆယ်ရီဘရိတ်တီဂေါ့စစ် …
ကျားမျုးိတုံးမှာထက် မြန်မာလူမျုးိ မျိုးတုံးသွားမှာ မျိုးကန်းသွားမှာကို ပိုစိုးရိမ်ပါသဗျာ။
မြန်မာပြည်က ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်း ကမာ္ဘ့ကျားဘေးမဲ့ စခန်း ကြီးးးးးးးးးးးးးးးး လို့.. ဂျာနယ်ထဲမှာ ရေးထားတာ တွေ့မိတယ်။ မပူကြနဲ့..